Talo iyo taageeroActuellement sélectionné
Mid ka mid ah shaqada hey’adda adeegga bulshadu waa in ay hubisaa in carruurta iyo dhallinyaradu ay helaan koritaan aammin ah. Waxaad la xiriiri kartaa hey’adda adeegga bulshada si aad kaalmo iyo taageero ugu heshid dhibaatooyinka kala duwan ee ku adag qoyska in ay gacantooda ku xalliyaa. Waxaad heli kartaa talooyin iyo taageero haddii dhibaato arrimaha qoyska ah aad qabtid, daroogo, dembi iyo wax kaloo badan. Haddii aad taqaannid wax canug ama dhallinyaro ah oo dhibaateysan markaas waxaad la xiriiri kartaa hey’adda adeegga bulshada
Warbixin kale ka akhriso Maamulka dhexe oo arrimaha u adeegida bulshada.
Haddii qof ka yar 18 sano aynan waaliddiintiisu sabab jirta awgeed canugga dhallinta yar u siin karin taageerada uu u baahanyahay ama ay u baahantahay, ama haddii canugga naftirkiisu uu ku noolyahay nolol is baabi’in ah tusaale ahaan daroogiistanimo iyo khamriyacabnimo ama dimbiilanimo, kan dhallinta yar gacanta ayaa lagu dhigi karaa si waafaqsan sharciga daryeelka dhallinyarada, LVU.
Rug qoys waxay ka shaqeysaa hawl ku jeedda waaliddiin iyo carruur. Rug qoys waa in ay ugu yaraan ka koobnaataa daryeelka caafimaadka hooyada, daryeelka caafimaadka carruurta, dugsi xannaano iyo barbaarin carruureed oo furan iyo adeeg bulsho oo ku wajahan hawlaha ka hortagga.
Taleefanka dadka waaweyn ee BRIS - xagga carruurta
Hey’adda badbaadada carruurta: Taleefanka waaliddiinta iyo E-mailka waaliddiinta